May 19, 2022 - Achawlaymyar
မင်ျဂလာဆောငျပှဲတှငျမိုးကွိုးအတှဲလိုကျပဈခသြဖွငျ့(၁၇)ဦးကှယျလှနျ ဘင်ျဂလားဒရှျေ့ နိုငျငံ အနောကျမွောကျဘကျ Shibganj မွို့တှငျ မင်ျဂလာဆောငျပှဲကငျြးပနသေညျ့ ပါတီပှဲအတှငျး Panama River မွဈကမျးဘကျမှ မိုးကွိုးမုနျတိုငျးမြား အတှဲလိုကျပဈခခြဲ့သဖွငျ့ နောကျဆုံးသတငျးအရ လူပေါငျး ၁၇ ဦးသဆေုံးပွီး သတို့သားအပါအဝငျ ၁၂ ဦးဒဏျရာရရှိခဲ့တယျလို့ The New York Time သတငျးစာတှငျဖျောပွခဲ့ပါတယျ။သတို့သား အပါအဝငျ ကနျြ လူ ၁၄ ယောကျလညျး ဒဏျရာရရှိသှားကွပါတယျ။ သတို့သမီးကတော့ ရှိမနတေဲ့ အတှကျ ဘာမှမဖွဈခဲ့ပါဘူးShibganj မွို့ရဲ့ မွဈဆိပျမှာ သတို့သမီး အိမျဆီ သှားဖို့ ရောကျလာကွတဲ့ သတို့သားနဲ့ အဖှဲ့တှေ လှပေျေါက အဆငျးမှာ မိုးကွိုးမုနျတိုငျးတှနေဲ့ ကွုံခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒဏျရာရရှိသူတှကေိုတော့ Meherul Islam ဆေးရုံသို့ပို့ဆောငျကုသထားပွီး ဆေးရုံတာဝနျခံ Mr. Hossain … Read more
စားဝတျနရေေးအဆငျမပွေ၍ နိုငျငံခွားတှငျ အလုပျသှားလုပျခဲ့ရာကံမကောငျးစှာဖွငျ့
စားဝတျနရေေးအဆငျမပွေ၍ နိုငျငံခွားတှငျ အလုပျသှားလုပျခဲ့ရာကံမကောငျးစှာဖွငျ့ သနျ့စငျခနျးတှငျသာ အိပျစကျခဲ့ရသော မိနျးကလေး ခကျခဲပငျပနျးနရေငျတောငျ ကိုယျတဈယောကျပဲ ခါးစညျးခံ၍ မိသားစုကိုတော့ ကောငျးမှနျစှာထားခငျြကွသော သူမြားသညျ အလှနျခြီးကြူးစရာကောငျးလှသညျ။ သို့ဖွဈ၍ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံသူလေးတဈယောကျသညျ မိသားစုစားဝတျနရေေး အခကျအခဲမြားကွောငျ့ တိုငျးတဈပါးသို့ ငှမြေားရှာရနျ စှနျ့စားပွီး အလုပျလုပျရနျ ထှကျခှာလာခဲ့သညျ။ မိနျးကလေးခမြာ ကံမကောငျးခငျြ၍ သဘောထားသေးသိမျသော အလုပျရှငျနှငျ့တှရေ့ကာ နစေရာအခနျးလေးတဈခု မပွောနှငျ့ စာနာစိတျမရှိပဲ သနျ့စငျခနျးတှငျသာ အိပျစကျခှငျ့ပေးခဲ့သညျ။ မိနျးကလေးသညျ အိပျရာလေးတဈခုသာ ကောငျးကောငျးရှိပွီး ခေါငျးအုံးအစား သူမအဝတျမြားကိုသာ ခုပွီးအိပျခဲ့ပွီး မိသားစုနှငျ့အဆကျသှယျရခြိနျတှငျ နရေတာအဆငျပွေ၍ စိတျမပူနှငျ့ လို့သာအမွဲပွောဆိုလရှေိ့သညျ။ မိနျးကလေးဧ။ျအဖွဈသညျ လူမှုကှနျယကျတှငျ ပြံ့နှံ့ပွီးနောကျပိုငျး သနားမိကွကာ ထိုနရောမှ အမွနျဆုံး ထှကျလာနိုငျဖို့မြှျောလငျ့မိကာ အကွငျနာမဲ့သော အလုပျရှငျကိုတော့ ပွဈတငျပွောဆိုနကွေသညျ။ စားဝတျနရေေးအဆငျမပွေ၍ နိုငျငံခွားတှငျ အလုပျသှားလုပျခဲ့ရာကံမကောငျးစှာဖွငျ့ သနျ့စငျခနျးတှငျသာ … Read more
ရုပျရှငျဆနျဆနျ သာကမွေို့နယျက အထညျဆိုငျကို သနေတျနဲ့ဝငျပဈ အမြိုးသမီးတဈဦး သဆေုံး
သာကေတမြို့နယ်ရှိ အထည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား အမျိုးသမီး ၁ ဦးသေဆုံးခဲ့ ရန်ကုန်မြို့၊သာကေတမြို့နယ်၊ ၇/အရှေ့ရပ်ကွက်ရှိ အထည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် မေ ၁၉ ရက်(ယနေ့) မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲကျော်က သေနတ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ် ပွားကာ အမျိုးသမီး ၁ ဦးသေဆုံးပြီး ၂ ဦးဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါ အထည်ဆိုင်သည် အောင်သပြေလမ်းနှင့်စံပယ်လမ်းထောင့်၌ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ကာ ကားမောင်းလာသည့် အမည်မသိအမျိုးသား ၂ ဦးမှဆိုင်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်၍ သေနတ်များဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ကားနဲ့ရောက်လာပြီး သေနတ်နဲ့ပစ်သွားတာလို့သိရတယ် ဘာ့ကြောင့်ပစ်ခံရတယ်ဆိုတာတော့မသိပါဘူး ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးပြီးချင်း ကားကိုအပြင်းမောင်းထွက်သွားကြတာ”ဟုရပ်ကွက်နေသူတစ်ဦးကပြောသည်။ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်တွင် အမျိုးသမီး ၁ ဦးမှာ ကျည်ထိမှန်ဒဏ်ရာများရရှိကာ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး အ မျိုးသား ၁ ဦးနှင့်အမျိုးသမီး ၁ ဦးတို့တွင်လည်း ကျည်ထိမှန်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “ဒဏ်ရာရတဲ့ ၂ ယောက်နဲ့သေသွားတဲ့အမျိုးသမီးကို ဆေးရုံကားနဲ့တင်ခေါ်သွားတာတွေ့တယ် … Read more
မနက်ဖြန်မှစကာ လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီး မိုးကြီးမယ့် ဒေသများ (ဂရုစိုက်ကြပါ)
မနက်ဖြန်မှစကာ လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီး မိုးကြီးမယ့် ဒေသများ(ဂရုစိုက်ကြပါ) ရန်ကုန်တိုင်းအပါအဝင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ၇ ခု၌ မနက်ဖြန်မှစကာ မုတ်သုန်လေအားအလွန်ကောင်းလာနိုင်၍ လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ဟု မိုးဇလထုတ်ပြန် မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ မေ ၁၈ ရက်(ယနေ့)နေ့လည် ၁ နာရီခွဲအ ချိန်၌ တိုင်းထွာရရှိချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အသိ ပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မိုးဇလ၏ တိုင်းထွာရရှိချက်များအရ မေ ၁၉ ရက် (မနက်ဖြန်)မှမေ ၂၃ ရက်အတွင်း ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်၊ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင် မုတ်သုံလေအား ကောင်းရာမှ အားအလွန်ကောင်းလာနိုင်သည်ဟု အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ဧရာဝတီ၊တန င်္သာရီတိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နှင့်မွန် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်မှနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုန်းရွာကာ ဒေသအလိုက် မိုးကြီးခြင်း၊နေရာကွက်၍ မိုးကြီးခြင်းများနှင့်လေပြင်းတိုက် ခတ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဟု အသိပေးထုတ်ပြန်ချက်မှ သိရသည်။ အလားတူ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ မုတ္တမကွေ့၊ မွန်-တန င်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင် လယ်ပြင်တို့တွင် … Read more
အပျနှံ​တဲ့ငှသေားတှအေားလုံး အကနျ့အသတျမရှိ ရကျခြိနျးမလို ပွနျလညျထုတျယူနိုငျပွီလို့ KBZ ဘဏျ ကွညော
အပျနှံတဲ့ငှသေားတှအေားလုံး အကနျ့အသတျမရှိ ရကျခြိနျးမလို ပွနျလညျထုတျယူနိုငျပွီလို့ KBZ ဘဏျ ကွညော အကုနျသိသတငျး အပျငှစောရငျးဟောငျး (စာရငျးရှငျအပျငှေ၊ ငှစေုဘဏျအပျငှေ၊ ချေါယူအပျငှေ)တှနေဲ့ အပျနှံထားတဲ့ ငှသေားအတိုငျး အကနျ့အသတျမရှိ ပွနျလညျထုတျယူနိုငျပွီလို့ KBZဘဏျက ဒီနထေု့တျပွနျပါတယျ။ ကမ်ဘောဇဘဏျသုံးစှဲသူ Customer တှေ အနနေဲ့ အရငျဖှငျ့လှဈထားတဲ့ အပျငှစောရငျး (စာရငျးရှငျအပျငှေ၊ငှစေုဘဏျအပျငှေ၊ ချေါယူအပျငှေ)ဟောငျးတှထေဲနဲ့ အသဈထပျမံ အပျနှံထညျ့သှငျးတဲ့ ငှသေားတှကေိုလညျး ထညျ့သှငျးတဲ့ ပမာဏအတိုငျး ကနျ့သတျခကျြမရှိ၊ ရကျခြိနျးယူမလိုဘဲ ငှသေားပွနျလညျထုတျယူနိုငျပွီလို့ ထုတျပွနျခကျြမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ အသေးစိတျသိရှိခငျြရငျတော့ KBZ Bank Call Center 09-951018555 ကို ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျတယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။ Crd- Akon Thi zawgyi, အပ်နှံတဲ့ငွေသားတွေအားလုံး အကန့်အသတ်မရှိ ရက်ချိန်းမလို ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပြီလို့ KBZ ဘဏ် … Read more
ဖှားဖကျတျောမှာ ကွိုးခညျြပွီး ဒနျးပုံစံမြိုး အမြိုးသမီးတယောကျလုံးကို ခြိတျဆှဲလှဲပွခဲ့တဲ့အံ့ဖှယျစှမျးအားရှငျအမြိုးသား(ရုပျသံ). .See more. ..
ဖှားဖကျတျောမှာ ကွိုးခညျြပွီး ဒနျးပုံစံမြိုး အမြိုးသမီးတယောကျလုံးကို ခြိတျဆှဲလှဲပွခဲ့တဲ့အံ့ဖှယျစှမျးအားရှငျအမြိုးသား(ရုပျသံ) ကမ်ဘာပျေါမှာရှိတဲ့ လူသားတှထေဲက အခြို့ဟာ သာမာနျလူသားတှနေဲ့ မတူတဲ့ စှမျးအားအခြို့ကို ပိုငျဆိုငျထားကွတာကိုတော့ အားလုံးပဲ ကွညျ့ဖူး မွငျဖူး တှဖေူ့းကွမှာပါ။ တဈခြို့တှကေ အလှနျကွီးမားလေးလံတဲ့ ကားကွီးတှေ ရထားကွီးတှကေို ပါးစပျနဲ့ကွိုးကိုကိုကျပွီး ဆှဲပှတာတို့ ဆံပငျနဲ့ ဆှဲပွတာတို့ ခါးမှာခညျြပွီးဆှဲပွတာတို့ အမြိုးမြိုး လူသာမာနျတှေ မလုပျနိုငျတာကို လုပျပွခဲ့ကွတာတှကေို ကွားဖူး ဖတျဖူး မှတျသားကွညျ့ရှု့ဖူးကွမယျထငျပါတယျ။ သာမာနျလူသားတှထေကျ ထူးခွားတဲ့ ခှနျအားတှကေို ပိုငျဆိုငျထားပွီး တဈခြို့ဆိုကမ်ဘာ့ဂငျးနကျဈ စံခြိနျတှပေါ တငျထားကွတာပါ။ ဖှားဖကျတျောမှာ ကွိုးခညျြပွီး ဒနျးပုံစံမြိုး အမြိုးသမီးတယောကျလုံးကို ခြိတျဆှဲလှဲပွခဲ့တဲ့အံ့ဖှယျစှမျးအားရှငျအမြိုးသား(ရုပျသံ). .See more. .. ယခုဗှီဒီယိုထဲမှာ မွငျရတာကတော့ စှမျးအားရှငျ အမြိုးသားဟာ သူ့ရဲ့ဖှားဖကျတျောမှာ ကွိုးခညျြပွီးဒနျးပုံစံမြိုး အမြိုးသမီးတယောကျလုံးကို ခြိတျဆှဲ … Read more
ဖခငျဖွဈသူမှာ ရုပျဆိုးသလောကျ သမီးလေးမှာ အရမျးခြောမောလှပနေ၍ မသင်ျကာပဲ DNA စဈကွညျ့လိုကျသောအခါ…
ဖခင်ဖြစ်သူမှာ ရုပ်ဆိုးသလောက် သမီးလေးမှာ အရမ်းချောမောလှပနေ၍ မသင်္ကာပဲ DNA စစ်ကြည့်လိုက်သောအခါ… အသက်၅နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးသည် မိဘနှစ်ပါးလုံးနှင့် ရုပ်ချင်းမတူသည့်အပြင် ချောမောလှပနေတာကြောင့် သံသယများစွာနဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူမှ DNAစစ်ကြည့်ခဲ့ရာမှ အလွန်အမင်း အံ့သြသွားခဲ့ရသည်။ သမီးလေးသည် လှပသော မျက်လုံးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းသည့်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်မှ သဘာဝအလှတရားဆိုပြီး ချီးမွမ်းခဲ့ကြရာ ဖခင်ဖြစ်သူမှရုပ်ဆိုးလွန်းတာကြောင့် ဆေးရုံတစ်ခုတွင် DNAစစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ရာ သမီးလေးမှာ ထင်ထားသည့်အတိုင်း သွေးသားရင်းချာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အမျိုးသားလည်း စိတ်တိုတိုနဲ့ အိမ်ပြန်လာပြီး ဇနီးဖြစ်သူအား မေးမြန်းခဲ့ရာ ရည်းစားပင်မထားခဲ့ဖူးကြောင်းဆိုခဲ့၍ ဇနီးဖြစ်သူကိုပါ DNAစစ်ကြည့်လိုက်ခဲ့ချိန်မှာတော့ ချောမောလှပလွန်းသည့် သမီးလေးဟာ သူတို့နဲ့သွေးသားတော်စပ်မှု လုံးဝမရှိကြောင်းကို သိခဲ့ရသည်။ ဇနီးဖြစ်သူမှာ သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးရင်သွေးလေးအား ဆေးရုံတွင် မွေးဖွားခဲ့ရာ ကလေးတွေကို ဆေးစစ်ကြည့်ရာတွင် သူနာပြုဆရာမတို့မှ ကလေးများစွာကို တစ်နေရာထဲတွင် မည်သည့်အမှတ်အသားမှမလုပ်ပဲ အတူထားရှိခြင်းဖြင့် … Read more
(၂၆) နှဈသားလေးနဲ့လကျထပျဖို့အတှကျ တဈကိုယျလုံးခှဲစိပျပွုပွငျခဲ့တဲ့(၆၂)နှဈအရှယျ..See more
Zawgyi (၂၆) နှစ်သားလေးနဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက် တစ်ကိုယ်လုံးခွဲစိပ်ပြုပြင်ခဲ့တဲ့(၆၂)နှစ်အရွယ်အဖွားအို အချစ်ဆိုတာ ဆန်းကျယ်တယ်လို့ ဆိုမလား။ ကြီးကောင်ကြီးမားကျမှ သူငယ်ပြန်တယ်လို့ ဆိုမလား။ ဒါမှမဟုတ် လူငယ်တွေ ဖြတ်လမ်းလိုက်တယ်လို့ အပြစ်တင်ရမလား။ တကယ်ပဲ အချစ်က အရာရာကို ကျော်ဖြတ်နိုင်သွားတယ်လို့ ဆိုရမလားမသိ။ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်စဉ် တစ်ခုကတော့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။. အသက်(၆၂) အရွယ်မုဆိုးမ အိုကြီးက (၂၆)နှစ်အရွယ်လူပျို ကလေးနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက် တစ်ကိုယ်လုံး ပလက်စတစ်ဆာဂျူရီလုပ်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သမီး(၂)ယောက်နဲ့ အဖွားအို ဝမ်က သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဆုံးသွားပြီး ကတည်းက ကော်ဖီဆိုင်နဲ့ တွဲထားတဲ့ ကုန်စုံဆိုင်လေးဖွင့်ကာ အသက်မွေဝမ်းကျောင်း လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ သူမအသက် (၆၀)ပြည့်တဲ့ (၂၀၁၈) ခုနှစ်လောက်မှာ သူမရဲ့ ဆိုင်ကိုပုံမှန်လာပြီး စားသောက် နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်က သူမကိုချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့ပါတယ်။ ကောင်လေးနဲ့ သူမတို့ကိုရင်းနှီးနေတာ … Read more